Khabiirka Kubbada Cagta Spain & Sky Sports Ee Guillem Balague Oo Ka Hadlay Wararka Cusub Ee Coutinho La Xidhiidhinaya Barcelona Iyo Haddii Real Madrid Ay Harry Kane Dhaafsan Doonto Gareth Bale. – WWW.Gool24.net
Khabiirka Kubbada Cagta Spain & Sky Sports Ee Guillem Balague Oo Ka Hadlay Wararka Cusub Ee Coutinho La Xidhiidhinaya Barcelona Iyo Haddii Real Madrid Ay Harry Kane Dhaafsan Doonto Gareth Bale.
11/10/2017 Mahamoud Batalaale
Khabiirka kubbada cagta Spain iyo Sky Sports ee Guillem Balague oo inta badan wax laga waydiiyo arimaha Sports dalkiisa Spain ayaa ka hadlay xaalada cusub ee ay Barcelona ku doonayso Philippe Coutinho kadib markii uu madax fulinta Barcelona si cad u sheegay in ay bisha January la soo saxiixan karaan ciyaartoy kasta oo ay doonayaan oo uu Coutinho ku jiro.
Guillem Balague ayaa sidoo kale ka hadlay xaalada Gareth Bale ee Real Madrid iyo wararkii sheegayay in Los Blancos ay doonayso in Harry Kane ay Tottenham kala soo wareegto taas badalkeena ay Bale iska iibiso haddii ay ka helayso lacagtii ay hore ugula soo wareegtay.
Laakiin khabiirka Sky Sports ee Guillem Balague ayaa hoos u dhigay in Barcelona ay suuqa bisha January la soo wareegi karto Coutinho oo ay suuqii xagaaga ku fashilantay wuxuuna cadeeyay in Barcelona ay doonayso laba xidig oo kala ah Marco Verratti iyo Philippe Coutinho balse in ayna suurtogal u noqon karin in January ay la soo saxiixan karto.
Dhinaca kale Guillem Balague ayaa sheegay in ugu yaraan ayna Real Madrid doonayn in Gareth Bale uu kooxdeeda ka baxo xili ciyaareedka soo socda wuxuuna xusay in Harry Kane uu ku soo baxay liiska abaal marinta Ballon d’Or in ayna ka dhigayn in uu bartilmaameed u noqdo Los Blancos.
Ugu horayn Guillem Balague oo ka hadlaya wararka Coutinho ee Barcelona ayaa yidhi: “Xidhiidhka Barcelona iyo Coutinho ma noqon doono mid socda, madaxa fulinta Oscar Grau waxa uu yidhi: “Haddii aanu doonayno in aanu Coutinho la soo saxiixano janauary waanu awoodnaa”. Miyay iyagu xiisaynayaan, dabcan way xiisaynayaan. Barcelona waxay u baahan tahay laba nooc oo ciyaartoy ah, Marco Verratti iyo Coutinho, laakiin waxaan filayaa in ayna dhici doonin January”.
Intaa kadib Guillem Balague ayaa ka hadlay xiisaha Real madrid ee Harry Kane iyo in Gareth Bale ay badal uga dhigan karaan wuxuuna yidhi: “Ma jiro rabitaan uu ugu yaraan Bale ku baxayo xili ciyaareedka soo socda. Kaliya sababtu waxay tahay in Kane uu ka mid noqday musharixiinta Ballon d’Or, taas si toos ah ugama dhigi doonto bartilmaameed Madrid ah”.